M.M.M Construction Co.,Ltd. | iMyanmarHouse.com
M.M.M Construction Co.,Ltd.
လူကြီးမင်းတို့၏ နေထိုင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ချမ်းသာမှု့အတွက် ကျွန်တော်များကုမ္ပဏီမှ လူအင်အား၊ ငွေအင်အား၊ နည်းပညာတို့ဖြင့် သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးမှု့၊ ခေတ်မှီဆန်းသစ်လှပသောဒီဇိုင်း၊ သင့်တင့်သောဈေးနှုန်း၊ မြင့်မားသောအရည်အသွေး၊ ပြည့်ဝသောဝန်ဆောင်မှု့တို့ဖြင့် စိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/M-M-M-construction-company-limited
M.M.M Construction Co.,Ltd. မှ ဆောက်လုပ်သော Project များ
Grand Wireless​ (M.M.M Construction )
Grand Wireless Condo သည် မရမ်းကုန်းမြို့ နယ် ၊ ကျောက်မျက်ရှေ့လမ်းတွင် M.M.M Construction မှတည်ဆောက်ထားပါသည်။- ဘိုးဘွားပိုင်မြေ ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားပြီး ကွန်ဒို Facilities အပြည့်အစုံပါဝင်ပါသည်။- ကမ္ဘာအေးဘုရား ၊ ပါရမီကလေးဆေးရုံ ၊ ဂမုန်းပွင့် shopping center ၊ ဂန္ဓမာ wholesale အနီးတွင်...
Nwe Aye Condo (M.M.M Construction)
M.M.M Construction မှဆောက်လုပ်သော Nwe Aye Condo ကို အမှတ်(ခ-၁)(ခ-၂)၊ မင်းနန္ဒာလမ်းနှင့် သီတာလမ်းထောင့်၊ နွယ်အေးရပ်ကွက်ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Foundation Pile Foundation Superstructure Reinforced Concrete Frame with Concrete Slab, Readymixed Concrete အသုံးပြုပါသည်။ Roof Reinforced Concrete Slab, Water Proofing System ပါဝင်ပါသည်။ Room Area ...
Mya Thazin Condo (M.M.M Construction)
M.M.M Construction မှဆောက်လုပ်သော Mya Thazin Condo ကို အမှတ်(၉၈)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမျက်နှာစာဒီဇိုင်းလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး စနစ်ကျသောအခန်းဖွဲ့စည်းမှု၊ ကားပါကင်နှင့် လုံခြုံမှု...
Ruby 36 Condominium (M.M.M Construction)
M.M.M Construction မှ ဆောက်လုပ်သော Ruby 36 Condominium ကို အမှတ်(၁၁၇/၁၂၇)၊ ၃၆-လမ်း (အလယ်)၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Foundation Pile foundation Superstructure Reinforced Concrete frame with Concrete Slab, Readymixed Concrete အသုံးပြုပါသည်။ Roof Reinforced Concrete Slab, Water proofing system ပါဝင်ပါသည်။ Room Area 21'x49' Room Type Master Bed Room (1)ခန်း၊ Bed Room (1)...
Mya Yar Gone Condominium (M.M.M Construction)
Mya Yar Gone Condominium ကို အမှတ်( ၅၂/၅၄)၊ ဒေါ်သိန်းတင်လမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် M.M.M Constructionမှတာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမျက်နှာစာဒီဇိုင်း လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး စနစ်ကျသောအခန်းဖွဲ့စည်းမှု၊ ကားပါကင်...
Mya Thazin Condominium (M.M.M Construction)
Mya Thazin Condominium ကို အမှတ်( 98)၊ အထက်ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် M.M.M Construction မှတာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမျက်နှာစာ ဒီဇိုင်းလေဝင်လေထွက်ကောင်း မွန်ပြီး စနစ်ကျသော အခန်းဖွဲ့စည်းမှု၊ ကားပါကင် နှင့်လုံခြုံမှု...
Min Nandar Condo (M.M.M Construction)
Min Nandar Condo ကို အမှတ် (၁-ခ)၊ မင်းနန္ဒာလမ်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် M.M.M Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Specification Foundation - Pile Foundation Superstructure - Reinforced Concrete Frame with Concrete Slab, Readymixed Concrete အသုံးပြုပါသည်။ Roof - Reinforced Concrete Slab, Water Proofing system ပါဝင်ပါသည်။ Room Area - 23' x 47' (1087 sqft) Room Type - Master Bed Room (၁) ခန်း၊ Bed Room (၁) ခန်း၊ Kitchen...
M.M.M Construction Co.,Ltd. ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်